‘पुरस्कार भारी भइसक्यो, अब कसैले नदिनू’ – " कञ्चनजंगा News "
‘पुरस्कार भारी भइसक्यो, अब कसैले नदिनू’
No Comments on ‘पुरस्कार भारी भइसक्यो, अब कसैले नदिनू’
काठमाडौं। म्यागसेसे पुरस्कारबाट सम्मानित समाजसेवी महावीर पुनले आफूलाई कुनै पनि पुरस्कार नदिन सार्वजनिक रुपमा आग्रह गरेका छन् । उनले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार प्रदान नगर्न आग्रह गरेका हुन् । हालै एक पुरस्कार ग्रहण गर्ने कार्यक्रममा उपस्थित भएका उनले मञ्चबाट यस्तो भनेका हुन्।
आईसिटी अवार्ड ग्रहण गर्ने क्रममा उनले सबैलाई विनम्रतापूर्वक यस्तो आग्रह गरेको भन्दै अब पुरस्कार नलिने बताएका हुन् । पुन पछिल्लो केही वर्षयता राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र स्थापनाको महाअभियानमा सक्रिय छन् ।
आविष्कार केन्द्रका लागि उनले केही पुरस्कार लिलाममा समेत राखेको घोषणा गरेका थिए । म्याग्दीको दुर्गम गाउँमा इन्टरनेट सेवा विस्तार गरेकाले उनले म्यागासेसे पुरस्कार पाएका हुन् ।
← माल्दिभ्सको समुद्रमा काजल अग्रवालको बोल्ड बिकिनी पोज, हेर्नुहोस् तस्वीर → रञ्जना मैनालीको घ’टनामा खुल्यो अर्को रहस्य ! कसरी भयो ५० लाख स्वहा ? (भिडियो हेर्नुहोस)